अब १७ मिनेटमै स्मार्टफोन फुुल चार्ज बिहिवार, चैत्र १४, २०७५
शिक्षकविनाका कम्प्युटर शिक्षा बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५
कल सेन्टर प्रयोगविहीन आइतवार, फाल्गुन २६, २०७५
युनियनको आपत्ति सरकारले ल्याउन लागेको ऐन प्रति नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न कडा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला युनियनले आपत्ति जनाएको हो । शनिवार, फाल्गुन ४, २०७५
जिमेलमा यी नयाँ फिचर्स एक समाचार अनुसार जिमेलले स्पाम इमेल फिल्टर गर्नका लागि मेसिन लर्निङ सिस्टममा आधारित एक नयाँ टूल डेभलप गरेको छ । कम्पनीको उक्त नयाँ टूलको नाम त्भलकयचायिध रहेको छ । शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५
विज्ञापनमा कडाइ : शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५
सावधान ! स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ ! रेडियसनबाट बचौं मगलवार, माघ २९, २०७५
यस्तो हुनेछ सामसुङको फोल्डेबल स्मार्टफोन (भिडियोसहित) दक्षिण कोरियाली स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी सामसुङले छिट्टै नै फोल्डेबल स्मार्टफोन ल्याउँदैछ । सामसुङको उक्त पहिलो फोल्डेबल स्क्रिन भएको स्मार्टफोनको नाम ग्यालेक्सी एफ हुने बताइएको छ । शनिवार, माघ १९, २०७५
काठमाण्डौमा मिडिया प्रर्दशनी हुँदै काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा मिडिया प्रर्दशनी हुने भएकोछ । आगामी अप्रील १२, १३ र १४ मा मिडिया प्रदशनी हुन लागेको हो । एकेडमी अफ मिडिया एण्ड ईभेन्टम्यानेजमेन्टले गत बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनगरि सो जानकारी दिएको हो । शुक्रवार, माघ ११, २०७५
१७ करोडको राडर जनशक्ति अभावका कारण अत्याधुनिक प्रविधिको मौसमको पूर्वसूचना दिने राडार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अमेरिकी कम्पनी इन्टरप्राइज इलेक्ट्रोनिक को–अपरेशनले विश्व बैंकको १७ करोड लागतमा नेपालको मौसम तथा जलसम्बन्धी अवलोकन कार्य प्रर्णालीलाई अत्याधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाउन राडार स्थापना गरेको हो । शनिवार, माघ ५, २०७५
बाँकेमा घट्दै साइबर अपराध आजभोलीको समय सूचना र प्रविधिको समय हो । प्रत्येक व्यक्ति यसको यसको भरपूर उपयोग गर्न अग्रसर भइसकेका छन् । राजधानी काठमाडांैदेखि बाँकेका दुरदराजमा पनि सूचना प्रविधिलाई सहजै जोडिएको छ । बिहिवार, मंसिर २७, २०७५